Ol Olaha Horumarinta Reer Miyiga - Wikipedia
Ol Olaha Horumarinta Reer Miyiga
Ol Olaha Horumarinta Reer Miyiga (English: Somali Rural Literacy Campaign) wuxuu ahaa barnaamij qaran oo caalamka uu la fajay ummada Soomaaliyeedna tusay kalsoonida ah in ay bulsho wax qabsan karto. Maahmaah Soomaaliyeed ayaa ah, "Rag tashaday cir tararay wey toli karaan taako labadeede", oo macnuhu yahay mar haddii talo la helo wax aan la soo koobi karin ayuu aadmigu qaban karaa. "Rag" waxaa loola jeedo dad oo dhan, rag iyo dumar ayaana ku jira.
2 Doodii Dheerayd iyo Qorista Af Soomaaliga
3 Go'aankii Xukuumada Kacaanka iyo Guddiga Af Soomaaliga
4 Wejiyada Ol Olaha Horumarinta Farta iyo Reer Miyiga
5 Tirakoobyada Ol Olaha Horumarinta Reer Miyiga: Dhaqaale, Muruq iyo Arday
6 Doorka Raadiyo Muqdisho, Raadiyo Hargaysa iyo Wakaaladaha Qaranka
7 Aragtida Aduunka
OL OLIHII FAR SOOMAALIGA 1972-1975 oo markii hore caasimada Muqdisho ama Xamar ka bilowday iyada oo shaqalaha Dawladda lagu amray inay 3 bilood ku bartaan qorista iyo akhrinta ka dib markii farta l qoray 1972dii. Mudo kordhis ayaa lagu sameeyay amarkii hore oo sadex bilood oo dheeraad ah ayaa shaqaalaha loogu daray si aysan shaqadood u lumin.
Taariikhda wanaagsan ee wadanka Soomaaliya iyo waxqabadkii dowladihii wadanka ayaa waxaa ka mid ah qoristii afka hooyo, Af Soomaali iyo ole olihii xigay oo dhowr sanadood socday. Macalimiin 28,000 gaaraya, muruq la biirshay iyo murti ayaa lagu fuliyay Ol Olaha Horumarinta Reer Miyiga.
Doodii Dheerayd iyo Qorista Af SoomaaligaEdit
Labo dowladood oo rayid ah iyo dood dabadheeraatay oo ku saabsanayd qorista Af Soomaaliga ayaa barnaamij aad loola yaabay, natiijo muuqatana soo hoyay, waxaa ansixiyay dowladii Kacaanka oo uu horkacayay Madaxwayne Maxamed Siyaad Barre.
18ka far ee ay afyaqaanadu u soo bandhigeen khubaradii maamulkii Guddiga Af Soomaaliga, 11 ka mid ah waxay ahaayeen nidaamyo cusub halka 4 ay ahaayeen xaruufta Carabiga 3 ka mid ahna xafuufta Laatiinka.
Dood dheer ayaa ka taagnayd arinta qorista Af Soomaaliga. Labadii dowladood ee Madaxwayne Aadan Cabdulle Cusmaan, Aadan Cadde 1960-1967 iyo Madaxwayne Cabdirashiid Cali Sharmaarke 1967-1969, go'aan way ka gaari waayeen. Gollaha Shacabka (Somali Parliament) ayaa sidoo kale ismariwaa ka dhacay oo doodu istaagtay. Aan afka qorno kana dhigno Carabi iyo, maya ee Laatiin aan qaadano, ayay aheyd dooda balse dadku qaar yiraahdeen Laatiin = Laa Diin. Macnahuna yahay xaruuf Carabi haa, laakiin xuruuf Laatiin waa Diin la'aan.
Ugu dambeyntii waxaa uu gudiga doortey allif uu lahaa afyaqaanka Shire Jaamac Axmed isaga Xoghaye u ahaa Guddiga Af Soomaaliga wuxuuna taageero ka helay af yaqaan Xaaji Muuse Ismaaciil Galaal oo Gudoomiye u ahaa Guddiga oo 2 jeer howlgalay. Muuse Galaal iyo Shire Jaamac Axmed waxay tijaabo ahaan u bilaabeen xuruufta Laatiinka 1961 iyo 1965 oo buugaag ay kala qoreen. Shire iyo Muuse waa qoraayaashii ugu horeeyay oo Af Soomaali rasmi ah wax ku qoro.
Buugta Shire waxaa ka mid ahaa buug xiiso badnaa oo la yiraah, "Gabayo, Maahmaah, iyo Sheekooyin Yaryar, Muqdisho 1965. Tusaaleyn inuu ka bixiyana aad ayay ugu sahlaneyd halka afyaqaanada kale ay heli waayeen doodooda oraaheed wax kaba oo qoraal ah.
Doorashada xuruufta Laatiinka waxaa looga faa'iidaysanayay sida qalabka wax lagu qoro uu sahalka u ahaa in la helo iyo barbardhig dhaqaale cusub in la geliyo qalab lagu sidkay far cusub.
Go'aankii Xukuumada Kacaanka iyo Guddiga Af SoomaaligaEdit
Sanad guuradii sadexaad ee Kacaanka ayaa bishii Oktoobar 21 sanadkii 1972 waxay dolwada ajandaheeda ku sii ifisay in la qori doono Afka Soomaaliga laga bilaabo sanadka dambe. Go'aan madaxwayne ayaa bishii koowaad ee sanadkii 1972 Dawladda ku dhawaaqday in la qoro Afka Soomaaliga.
Wejiyada Ol Olaha Horumarinta Farta iyo Reer MiyigaEdit
Ol olaha Far Barashada wuxuu ka koobnaa saddex waji oo kala ahaa:
1. Wejiga Kowaad ee ol olihii barnaamijka Far Barashada lagu bilaabay shaqaalaha Dawladda oo iyagu mudo gaaban loo qabtay inay ku bartaan qorista Far Soomaaliga (ogoow, arintu waa qoris oo kaliya. Dadka way yaqaaneed ku hadalka afka). Wuxuu wejigaan ku soo af jarmay lix bilood gudahood. Ka dib markii Qorista Af Soomaaliga lagu dhawaaqay 1972dii oo ku beegnayd Sanad Guuradii 3aad ee Dowladii Kacaanka.
2. Wejiga labaad waxaa laga hirgaliyay dhamaan magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dalka. Wejigaan wuxuu qaatay sanad kaamil ah kuna adan sanadkii ugu horeeyay ol olaha Far Barashada kaas oo ku ekaa 1973-1974.
3. Wejiga sadexaad ee ol olaha farbarashada waxaa markii dambe loo bixiyay Ol olaha Horumarinta Reer Miyiga waxaana ol olihii waxbarashada la gaarsiiyay ilaa deegaan walba iyo tuulo kasta macalimiin loo diro.
Qaybtii hore ee ol olaha, shaqaalihii Dawladda oo dhan waxaa lagu amray in ay mudo 3 bilood gudahood ah bartaan qorista iyo akhrinta Far Somaaliga. Mudadaas markii dambe waa la dheereeyay oo 6 bilood ayaa laga dhigay. Xuruufta Laatiinka ayaa la doortay iyada oo Gudigii Af Soomaaliga la soo hordhigay ilaa 18 nooc oo hab far qoris ah, kuwaas oo ay kala wateen aqoonyahano Soomaaliyeed oo mid walba uu allif watey isaga oo taageerayaal ka kasbanayay bulsho waynta si loo qaato habka uu allifay.
Wareegto dowladeed oo soo baxday Janaayo 1, 1972 kadib, qorista Af Soomaaliga waxaa lagu baaahiyey wadanka oo dhan heer gobol, degmo iyo tuulo oo la gaarsiiyay Ol Olaha Waxbarashada oo si rasmi ah u bilowday bishii luuliy 15dii, 1974 kana bilowday isku imaad reer Muqdisho oo dhan u soo banbaxeen oo lagu qabtay Istaadiyo Muqdisho.
Tirakoobyada Ol Olaha Horumarinta Reer Miyiga: Dhaqaale, Muruq iyo ArdayEdit
Ol olaha horumarinta Af Soomaaliga, xaga maaliyada, 8 malyan oo Shillin Soomaali ah ayaa ku baxday ol olahaas caanka noqday. Tirokoobyada ay dowladu samaysay oo qoraalo warbixin lagu soo saaray waxaa ka mid ahaa in ugu yaraan 125,000 ol ole oo wajiyo badan la qaaday ilaa heer tuulo.  Bulshada reer miyiga ee ka qaybgashay ol olaha tirada shaqsi waxay aheyd 1,257,779 qof 1.  Ole olaha waxaa uu hal kudhigiisu ahaa "Hadaad taqaan bar, hadaanad aqoon baro", marka la soo gaashana ahaa "Bar ama barro."
Shaqaale dowladeed, saraakiisha ciidamada qalabka sida, macalimiin iyo arday dugsiyada sare sanad laga hakiyey oo wadartoodu aheyd 28,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay barnaamijka hirgelinta Af Soomaaliga oo socday 1972-1975. Boqolkiiba tirada dadka wax qorta akhrisana waxay gaartay 55% halka markii hore ay ahayd 2 ilaa 5%.
Doorka Raadiyo Muqdisho, Raadiyo Hargaysa iyo Wakaaladaha QarankaEdit
Laga bilaabo Oktoobar 21, 1972 ilaa barnaamijka ol olaha waxbarashada oo xaflad lagu soo afjaray, barnaamijyo aan kala go' laheyn ayey Dawladda Kacaanku ku soo bandhigtey laamaha warfaafinta wadanka.
Wasaaradihii ku howlanaa fulinta ole olaha waxbarashada waxay wadanka oo dhan gaarsiiyeen qoraalo, barnaamijyo ka baxayay raadiyaha iyo aalado kale. Waxaa barnaamijka horkacaysay Wasaarada Hanuuninta Dadwaynta oo ay wakaalado badan hoos iman jireen sida:
Radio Hargeysa iyo
Aqoonsi caalami ah ayay heshay bulshada Soomaaliyeed iyo amaan howl badnaanta Dawladda. Af Soomaaliga dhanka horumarka luqadeed, wuxuu noqday afka sadexaad ee Qaarada Afrika. Luqadaha Af Carabiga iyo Af Howsa ayaa kaalinta 1aad iyo 2aad ah.
Arimahan oo dhan waxay dhaceen toban sano iyo bar ka dib markii gumeysigii Afrika soo afjarmay inta badan wadamada qaaraduna ay xoriyad heleen haba u jireen xoriyadahaas heerar kala duwan.
Maxdwaynaha Tansaaniya Nayeeri mar uu la hadlayay bulshada wadankiisa wuxuu yiri, "Anaga waxaan hadal hayno Soomaalida ficil ahaan ayay u qabtaan." Wuxuu ula jeeday qoristii afka iyo ol olahii ka dambeeyay ee lagu baahiyay farta magaalo, degmo ilaa heer tuulo.
Ololaha horumarinta Reer Miyiga, Wasaarada Warfaafinta, Muqdisho 1975
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ol_Olaha_Horumarinta_Reer_Miyiga&oldid=143757"
Last edited on 28 May 2015, at 13:45
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 13:45.